Ahịa ọhụrụ nke ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Tanzania iji dọta dollar ndị njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ahịa ọhụrụ nke ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Tanzania iji dọta dollar ndị njem
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Onye isi ndị otu na -ahụ maka ndị njem na Tanzania, Sirili Akko
Ndị otu Tanzania na -ahụ maka ndị na -ahụ maka njem (TATO) mere ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa site n'ịkpọ ndị egwuregwu n'agụ ọnụ ahịa njem nlegharị anya ka ha na -agbasi mbọ ike na mbọ ya siri ike ịhụ na onweghị onye fọdụrụ ka ụlọ ọrụ na -amalite ịmaliteghachi.
TATO anọwo na -arụ ọrụ elekere niile iji chepụta ihe ngwa ngwa iji nyere aka tụgharịa njem nlegharị anya nke nsogbu coronavirus meriri.
Ndị otu a ebutela ndị nnọchi anya njem njem zuru ụwa ọnụ na Tanzania ka ha nyocha ma hụ ọmarịcha obodo a.
Ebumnuche ya kachasị ọhụrụ bụ ịkwalite mba ahụ ka ọ bụrụ ebe dị nchebe n'etiti ọrịa COVID-19.
Onye isi ụlọ ọrụ TATO kwuru, Maazị Sirili Akko, kwuru na ụtụtụ ụtụtụ okwu Private Star Television nke Tanzania kwuru, "Ka ụwa malitere imeghe ọzọ, atụmanya njem nlegharị anya na -enwu gbaa. gosi dị ka akụkụ nke ụbọchị nlegharị anya ụwa fête.
N'ịkọgharị isiokwu maka afọ 2021, njem nlegharị anya maka uto, Maazị Akko kwuru na TATO na -arụ ọrụ ehihie na abalị iji chepụta usoro ngwa ngwa iji nyere aka tụgharịa njem nlegharị anya nke nsogbu coronavirus meriri iji baara mmadụ niile uru.
“Anyị, dị ka ndị ọkwọ ụgbọ ala nkeonwe yana njikọ aka na UNDP na gọọmentị, ekpebila iwepụta usoro mgbake ndị njem. Ndị a gụnyere iweghachi ntụkwasị obi ndị njem site na ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọrụ anyị niile n'ihu, ịgbasa ebe nlele nlele COVID ozugbo na ogige ntụrụndụ mba, na-ebuga ụgbọ ihe mberede ụgbọ ala, yana ịtụgharị uche na atụmatụ azụmaahịa dị elu. nsogbu COVID-19, ”Ka ọ kọwara.
N'ezie, TATO ebutela ndị nnọchi anya njem njem zuru ụwa ọnụ na Tanzania ka ha nyochaa ma hụ ịma mma obodo n'ime atụmatụ ọhụrụ ya iji kwalite mba ahụ dị ka ebe dị nchebe n'etiti ọrịa COVID-19, nke kụrụ isi ahịa njem nlegharị anya.
Maka TATO, echiche nke na -eme ka azụmaahịa na echiche akụ na ụba karịa bụ ịkpọbata ndị ọrụ njem ka ha hụ ntakịrị ihe nkiri ekepụtara eke obodo nke ọma karịa ka ndị na -eme njem nlegharị anya jiri foto na -agagharị agagharị na -eso ha na mba ofesi.
Otu nwa agbọghọ nke ndị na -ahụ maka njem njem na United States, ndị na -agbagharị njem ha ịgagharị obodo, anọwo na Arusha, isi obodo safari; Ogige mba Lake Manyara; Ndagwurugwu Ngorongoro, nke akpọrọ Ogige Iden nke Africa; Ogige ntụrụndụ Serengeti iji hụ mwepụ wildebeest fọdụrụ n'ụwa; nakwa n'Ugwu Kilimanjaro, nke a na -ewere dị ka elu ụlọ Africa.
Nke a na -abịa n'oge ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na -eche ihe ịma aka pụrụ iche ihu, na -amanye ndị na -eme njem nlegharị anya ka ha nwaa ịgbasa usoro azụmaahịa ha iji dọta ọtụtụ ndị ọbịa ma bulie ọnụ ọgụgụ ndị njem iji lanarị mwakpo nke asọmpi cutthroat site na ebe ndị ọzọ nwere ụdị ihe nkiri na mbata nke mbata. Ọgbaghara covid19.
Ndị ọrụ nlegharị anya njem nlegharị anya na -ekwu na mbọ a na -atụ aro mgbanwe mgbanwe azụmaahịa azụmaahịa, ebe ọ bụ na ụzọ ndị njem na -agbagọ agbagọ maka ịkwaga mba ọzọ iji kwalite ebe nlegharị anya obodo nyere onyinye nke ukwuu.
Ọrịa a eyiela egwu niile metụtara njem anya, mebere ọnọdụ ebe ụzọ nkwukọrịta na mmekorita nwere ike ịgbatịkwu dijitalụ karịa ụzọ na ụzọ nkịtị, wee gosipụta adịghị ike n'ihe gbasara azụmahịa.
Ọzọkwa, Njem njem nlegharị anya nke Tanzania kwesịrị ịnyagharịa ohere na ihe mgbochi nke echiche dị iche iche nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, gburugburu ebe obibi, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
TATO, ndị otu azụmahịa na-akwalite ndị otu na-akwalite njem nlegharị anya ka mma, na-arụkwa ọrụ nke ijikọ azụmaahịa na ndị mmadụ n'otu azụmaahịa iji mee ka ịkekọrịta ihe ọmụma, omume kacha mma, azụmaahịa, na ịkparịta ụka n'ntanet n'ofe ụlọ ọrụ.
George Tarimo, onye isi oche maka ndị omenkà aka dị nta n'ahịa Maasai dị na Arusha, kwuru na oria ojoo COVID-19 enyela nkuzi na mkpa ọ dị inwe njikọta ọnụ ahịa njegharị njem nlegharị anya na Tanzania.
September 30, 2021 na 08: 40
Ịchọrọ ịbawanye mmefu ego ịre ahịa gị ma gbasaa ntọala ndị ahịa gị? Azụmaahịa njem nwere ike inye aka mepee ahịa ọhụrụ, dọta ọtụtụ ndị ọbịa Ụlọ ọrụ safari dịkwa mkpa iji dọta ndị njem nlegharị anya n'ụdị njem a na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya lekwasịrị anya n'ịzụ ahịa n'ịnọchite anya ya.